Malunga nathi-iNanjing Liming Bio-products Co, Ltd.
Imveliso yeNanjing Liming Bio-Co, Ltd.
I-Nanjing Liming Bio-products Co, Ltd. eyasekwa ngo-2001, inkampani yethu iye yabanegalelo ekuphuhliseni, ukuvelisa kunye nokuthengisa iimvavanyo ezikhawulezileyo zezifo ezosulelayo ngakumbi ii-STDs.Ngaphandle kwe-ISO13485, phantse zonke iimveliso zethu ziphawulwe nge-CE kwaye zamkelwe yiCFDA. Iimveliso zethu zibonise ukusebenza okufanayo xa kuthelekiswa nezinye iindlela (kubandakanya i-PCR okanye inkcubeko) ezichitha ixesha kwaye zibiza kakhulu. Sebenzisa iimvavanyo zethu ezikhawulezayo, nokuba sisigulana okanye oononophelo lwempilo banokugcina ixesha elininzi lokulinda kuba lifuna nje imizuzu eyi-10.
Besiqwalasele ngokungqongqo iinkqubo zokuqinisekisa umgangatho kwaye sithobela imigaqo yangoku yezixhobo zonyango kwimveliso, ulawulo lomgangatho, ukugcinwa, ukuthuthwa kunye neenkxaso zobuchwephesha, zisenza iimveliso ezikumgangatho ophezulu zokusebenzela abathengi bethu kuyo yonke indawo umhlaba.
Ngokuhambelana nokusasazeka kwesibetho se-COVID-19, amazwe kwihlabathi liphela ayasokola ukuxilonga nokulawula esi sifo kwangexesha.Our yethu iphuhlise iindlela ezintsha, ezinolwazelelelo kunye nezilingo zeemolekyuli zovavanyo lwe-COIVD-19.
Injongo yethu kukuba sisisombululo esipheleleyo semveliso ye-POCT kwaye sijonge phambili ekusebenzeni nawe ukwenza umfanekiso omhle wezempilo yabantu.
Inkampani yasekwa kwaye yaba ngumhambisi weBio Merieux kunye noAlere
Guqula uphando oluzimeleyo, uphuhliso kunye nokuveliswa kwe-IVD, kunye nokufumana izatifikethi zobhaliso zeklasi yesi-6, isiQinisekiso sokuBhaliswa se-1class II kunye nezatifikethi zobhaliso zeklasi yesi-5 ezikhutshwe ngurhulumente kulawulo lokutya kunye neziyobisi
Ukwakhiwa okuyimpumelelo kweqonga lobuchwephesha lobuchwephesha
Uphumelele ngempumelelo inoveli yokuvavanywa kwepneumonia yenoveli coronavirus
Ube liqabane lonikezelo lwexesha elide lwe-UNICEF ekhawulezayo yovavanyo lwekholera kwaye watyikitya isivumelwano sokusebenzisana kunye nenkampani yethu
ICoronavirus yovavanyo lweCovid-19, ICoronavirus Antigen yovavanyo lweKhithi, H. Pylori Ag Uvavanyo olukhawulezayo lubhaqa i-Antigen, Vibrio Cholerae O1 / O139 Uvavanyo lwe-Antigen Combo Rapid, Ikhithi yovavanyo lwe-Igm / Iggrapid, Inoveli Coronavirus Rapid Uvavanyo Ket,